युरोकपमा आज इटाली भर्सेज स्पेन, कस्ले मार्ला बाजी ? - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
युरोकपमा आज इटाली भर्सेज स्पेन, कस्ले मार्ला बाजी ?
काठमाण्डाै । जारी युराे कपकाे पहिलाे सेमी फाइनलमा अाज पहिलाे खेल स्पेन र इटाली भिड्दै छन् । रोबर्टो म्यान्सिनीले इटलीको टोलीलाई निकै उत्कृष्ट बनाएका छन् । जारी प्रतियोगितामा इटलीले सबै खेल जितेको छ । आज उसले सेमिफाइनलमा स्पेनको सामना गर्दैछ । यो खेल नेपाली समयअनुसार मध्यराती १२ः४५ मा हुनेछ । यता, इटली ३२ खेलयदेखि पराजित छ । तर, एकै रातरात इटली स्पेन बन्न नसक्ने दाबी प्रशिक्षक म्यान्सिनीले गरेका छन् । ‘हामी इटली हौं र हाम्रो आफ्नै शैली छ । उनीहरुको निकै परिभाषित शैली छ र हामी इटली हौं ।’